Tetik'asa Maketing Digital avy amin'ny Semalt mba hampitombo ny vola miditra ao amin'ny hotely
Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia manintona ny mpanjifa manana tsiro sy safidy samihafa.Maro amin'ireo mpandraharaha amin'ny orinasa no miatrika fanapahan-kevitra sarotra miezaka ny mandinika ny resadresaka farany na teny fanoherana toy ny "marketing marketing" na "data lehibe".Izy io dia mahatonga ny hotely hiditra amin'ny paikady be pitsiny ary mieritreritra ny teti-bola ara-barotra raha mbola mampiasa mpanome maimaim-poana hamalyantso an-telefaona - curso fotografia reflex nikon gratis. Ratsy izany, ary tokony hiverina amin'ny fotokevitra ny hoteliers amin'ny fifantohana amin'ny zavatra manan-danja-vahiny.
Mialà eo amin'ny sehatry ny varotra nomerika, omenanataon'i Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt .
Nohavaozina tamin'ny fanandramana fandefasana vahiny.
Ny lafiny manan-danja indrindra amin'ny fivarotana efitrano fandraisam-bahiny dia ny famerenan-tsofina avy amin'ny vahiny.Araka ny Statistic Brain, 58% ny famandrihana hotely dia mitety aterineto. Izany dia isa midadasika. Ny tranokalan'ny tranokala ao amin'ny hotely dia manan-danjaaspect of online booking. Mahagaga fa sarotra be ny tranokala habaka ao amin'ny tranokalan'ny tranonkala ary mahatonga ny vahiny hiasa mafyBoky efitra iray. Ny olona dia tsy tokony hijery ny "amenities" na "toeram-ponenana" ary miandry ny ora alohan'ny hamoahana ilay pejy. Ankoatra izany, aNy pejy fandraisana trano maoderina dia tokony hanana fizarana izay ahafahan'ny mpitsidika mamaky sy mahita fampahalalana manan-danja alohan'ny fandefasana ny serivisy. vahinyte-hahita ny efitrano, ratings, testimonials ary boaty famandrihana. Ny fanatanterahana tetik'ady SEO mahomby dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ity traikefa ity.
Fantaro ny marina momba ny SEO any amin'ny indostrian'ny vahiny.
Anisan'ny mpiandraikitra ny SEO nanomboka ny taona 2004 ny hotely. Tamin'izany fotoana izany,tranonkala iray ihany no afaka mametraka ny teny fanalahidy ao anatin'ny marika tsy hita maso ao amin'ny pejy fandraisana ary ny fitaovam-pitadiavana toa an'i Google dia hanondro ny teny fanalahidy vitsivitsy.volana taty aoriana. Na izany aza, vao haingana ny zava-drehetra, ary ireo indices Google algorithm dia misaintsaina ny toerana iray ao anatin'ny andro. Ankoatra izany, mampiasa i GoogleRankBrain, sehatra fanasokajiana mba hametrahana araka ny marina ny marina. Midika izany fa tsy dia mifehy loatra ny orinasafitadiavana fikarohana. SEO dia tsy dia asa loatra, ary ny hotely dia afaka manova ny tetibolan'ny SEO mankany amin'ireo fomba amam-panao nomerika hafa toy ny media sosialy.
Fantaro ny fifandraisana misy eo amin'ny media sosialy sy ny fahaiza-manaony.
Amin'io lafiny io, ny ankamaroan'ny hotely fisakafoana dia tratra noho ny haingam-pandeha hainganaizay mampitombo hatrany ny haino aman-jery sosialy toy ny Snapchat sy Facebook. Hendry ho an'ny hotely ny mahazo ny media sosialy tsara indrindra ampiasaina amin'ny digitalbarotra. Angamba, tokony hampiroborobo koa ny traikefa SEO. Ireo manam-pahaizana ihany koa dia manambara fa tsy maintsy mampiasa vola amin'ny famoronana lahatsary ny hotelyHatramin'ny 67% n'ny vahiny dia mijery ny famolavolan'ny famandrihana mialoha ny famerenana efitrano iray. Ny lahatsary koa dia manome mpandeha lavitra manana fahatsapana tsaratsara kokoa.
Mankato Instagram sy Facebook.
Tsy azo atao amin'ny sehatra media sosialy tokana, fa hotelierstokony ho eo amin'ireo roa ireo. Ny mpanjifa vaovao dia miankina amin'ireo sehatra ireo mba hamaritana raha mbola misy trano fandraisam-bahiny mbola mavitrika amin'ny fanaterana ny serivisy.
Ampitomboina ny isan'ireo mpanaraka.
Ny ankamaroan'ny hotely dia tsy mahafantatra ny isan'ireo mpanaraka azy. Manana mpankafy zato vitsivitsy tsy afakaMampiroborobo ny varotra nomerika amin'ny indostrian'ny vahiny.
Manendry loharano natokana ho an'ny media sosialy.
Ny haino aman-jery sosialy dia sehatra iray izay mitaky amin'ny trano fandraisam-bahiny hampiasa vola amin'ny manampahefana.Tokony hanana fahatsapana ny fomba, ny fampiroboroboana ary ny hatsikana izy ireo, ankoatra ny fahaiza-manao momba ny sary sy ny fahaiza-manao.